यी ३ राशि भएका युवतीहरु प्रेममा छिट्टै धोका दिने गर्छन् ! «
यी ३ राशि भएका युवतीहरु प्रेममा छिट्टै धोका दिने गर्छन् !
आफ्नो सम्बन्ध धेरै समय सम्म टिकोस भन्ने सबैको चाहना हुने गर्छ। तर सबैको सम्बन्ध धेरै समय सम्म टिक्छ भन्ने चाहिं केहि छैन। ज्योतिष शास्त्रले हरेक राशिको फरक-फरक राशिको व्यवहार फरक हुने गर्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार केहि राशिसँग जोडिएको सम्बन्ध कमै मात्र टिक्ने गर्छ। हरेक युवाले निम्न उल्लेखीत राशी भएका युवतीसँग जोडेको सम्बन्ध खासै टिक्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ।
मेष राशि भएका युवतीहरुको चाहना धेरै फरक रहेको हुन्छ। चाहना जहिले पनि बदलिने हुँदा मेष राशि भएका युवतीहरु आफ्नो प्रेमीसँग खुसि नहुने गर्छन् जसको कारण आफ्नो प्रेमीलाई धोका दिने काममा पनि अगाडी हुने गर्छन्।
यस राशि भएका युवतीहरु धेरै जिद्दी हुने गर्छन्। आफ्नो मर्जी चलाउन खोज्ने हुँदा घमण्डी पनि मानिने गर्छन्। साथै आफ्नो प्रेमीको ध्यान पनि धेरै राख्ने गर्छन्। तर जिद्दी बानि भएको हुँदा रिसमा आफ्नो सम्बन्ध तोड्न पनि पछि नहट्ने गर्छन्।
यस राशि भएका युवतीहरुको इच्छा धेरै हुने गर्छ भने जीवनमा कहिले पुरा नहुने इच्छा पनि राख्ने गर्छन्। जसको कारण आफ्नो इच्छा पुरा गर्नको लागि कुम्भ राशि भएका युवतीहरु आफ्नो प्रेमीसँग सम्बन्ध तोड्न सक्छन्।